Iron oxide ink, Iron oxide Yellow, Granular Iron oxide - Shencai ink
Chrome oxide akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Shijiazhuang Shencai ink factory bụ ọkachamara na mmepụta nke ígwè oxide uhie, ígwè oxide odo, ígwè oxide nwa, ígwè oxide green, ígwè oxide oroma, ígwè oxide aja aja, chromium oxide akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ezi nkà akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ígwè phthalein green factory, kwa afọ mmepụta nke 40000 tọn…
Iron oxide akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 5605/835
Iron oxide ojii 722/750
iron oxide odo 311/313/920
iron oxide uhie 110/120/130/180/190
Site na usoro mmepụta atọ, ikike mmepụta kwa afọ nke tọn 50,000.
Nwere R & D Nka na ụzụ Team na Professional Laboratory, iji elu ule akụrụngwa ..
Anyị ga-abụ ọnụahịa kachasị mma na ọrụ kacha mma dị mma nye ndị ahịa ọhụrụ na ndị ọhụrụ.
02 2020 / Nọvemba
mmepụta Filiks nke ígwè oxide unu ...
Iron oxide edo edo bụ uzo uzo odo odo. Ọnụọgụ nke mmekọrịta bụ 3.5. Njirimara kemịkal na-adịgide adịgide. Na urughuru size bụ 0.01-0.02 μ M. Ọ nwere nnukwu kpọmkwem kpọmkwem ebe (banyere ugboro 10 nke ndị nkịtị ígwè oxide), ike ultraviolet absorption, ìhè na-eguzogide, ikuku ...
mmepụta usoro nke iron oxide uhie
E nwere isi ihe abụọ na-emepụta usoro nke ígwè oxide uhie: akọrọ na mmiri. Taa, anyị ga-eleba anya na usoro abụọ a. 1. On akọrọ usoro kpọrọ nkụ usoro bụ omenala na mbụ ígwè oxide red mmepụta usoro ke China. Uru ya bụ usoro mmepụta dị mfe, usoro dị mkpirikpi ...
Ọhụrụ ígwè oxide ink mmepụta ...
Shijiazhuang Shencai ink Factory tọrọ ntọala na 2003. Anyị nwere nnukwu Iron Oxide ink Production Base (Hebei Chengyu ink Co., Ltd), ọ na-emi odude ke Ningjin Salt Chemical Industrial Park, Hebei Province, bụ a n'ógbè chemical ulo oru ogige, bụ eze na mmepụta. Na atọ pro ...
Obodo Guzhuang, Shangzhuang Town, Mpaghara Luquan, Shijiazhuang, Hebei, China